दैनिक २६ हजार कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ : प्रवक्ता डा. गौतम
मंगलबार, कार्तिक ४, २०७७ ०८:०९:४४ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
मंगलबार, आश्विन २७, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट
नेपालगन्ज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक २६ हजारको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ । सरकारी ४० र निजी १८ वटाबाट गरी दैनिक २६ हजारको परीक्षण गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
‘पहिले एउटा पनि ल्याब थिएन । अहिले सरकारी ४० र निजी १८ वटा छ । अहिले २६ हजार नमुनाको परीक्षण गर्न सकिन्छ ।’
५८ वटा ल्याबबाट २६ हजारको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएको बताएपनि अहिलेसम्म दैनिक १०/१५ हजारको हाराहारीमा मात्र परीक्षण भइरहेको छ । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । परीक्षण बढाएर संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्न सकिए मात्र संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘परीक्षणको दायरा नबढाएसम्म नियन्त्रण गर्न कठिन छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘परीक्षण गर्दै संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने हो । समयमै संक्रमितको पहिचान गर्न नसक्दा आज यो परिणाम आएको हो ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन २७, २०७७, ११:३१:००
बाँकेमा ३८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
बाँकेमा एकै दिन ७० जना डिष्चार्ज
कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमित पाँच हजार